Xargaha hore ee xariiqa tamarta - Testeck Co., Ltd.
Hoyga > Wararka > Xalka
Xargaha pre-laanta ee xarunta tamarta korantada
Xarumaha pre-laanta ee xarunta tamarta tamarta
Kabaha dareeraha ee haanta saliida waxaa la dhigayaa laamaha hore ee tuubbada jiingadda.Laamaha hore ee xariggu waa bannaanka haanta saliidda, ka dibna dareeraha heerkulka ayaa la rakibay. Kabaha ka baxsan haanta saliida waa la hagaajiyaa, mana aha lagama maarmaan in dib loo qoro inta lagu jiro dayactirka.
Itis ayaa lagu dhejiyay fiilooyinka dareeraha ka baxsan haanta saliidda ee hawo-koronto-dhaliyaha.
structure structure Qaabdhismeedka fiilooyinku waa mid iswaafajsan, oo ka kooban rakibid habboon iyo dayactir fudud.
â € ¢ Fiilooyinka waxaa lagu hagaajin karaa banaanka haanta saliida waqti dheer, sidaa darteed waxay u baahan tahay oo kaliya in laga jaro xiraha oo la beddelo dayactirka dareenka, kaas oo si weyn u hagaajinaya waxtarka dayactirka.
â ¢ Dhererka xarigga iyo dhererka xarigga laanta ayaa loo baran karaa iyadoo loo eegayo cabirka cutubka.
â € ¢ Waxaa lagu ilaaliyaa tuubada birta ah ee birta ah ee birta ah, taas oo ka hortageysa waxyeelo kasta oo farsamo oo soo gaarta isla markaana fududeysa fiilooyinka goobta.
Wax war ah
Xalka nidaamka cabbirka heerkulka ee busbar ku lifaaqan saldhigga korantada